ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် ဖွဲနုမှ ဖွဲနုဆီထုတ် လုပ်နိုင်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နည်းပညာရှင် များန?? - Yangon Media Group
ဆန်ထွက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် ဖွဲနုမှ ဖွဲနုဆီထုတ် လုပ်နိုင်ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နည်းပညာရှင် များန??
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈-ဆန် ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဖွဲနုမှတစ်ဆင့် ဖွဲနုဆီများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှနည်းပညာရှင်များနှင့်ဆွေး နွေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာလယ် ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
ဆန်စပါးမှတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် တစ်ခုအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအ တွက် လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းကိ ရိယာများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မှာယူ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာ နှင့် စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းနိုင်ရေးတို့ အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နည်းပညာ ရှင်အပါအဝင် ပစ္စည်းများမှာယူ တင်သွင်းသည့်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန် မာလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းအောင်က အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်ကပြောသည်။
“”ဖွဲနုဆီထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းပညာနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံကအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေး နွေးနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီမှာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်””ဟု ၄င်းကပြောသည်။ ယင်းအဖွဲ့များနှင့်ဆွေးနွေးနေသည့်အပြင် လာမည့်ပွင့်လင်းရာသီ တွင်မြောင်းမြ၊ ကျိုက်လတ်နှင့် တွံ တေးမြို့နယ်တို့တွင် ဖွဲနုဆီစက် များတည်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင်နေ ကြောင်းလည်း သိရသည်။ မြန်မာ လယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင် ကုမ္ပ ဏီအနေဖြင့် ယင်းဒေသများ၌ ဖွဲနု ဆီစက်များတည်ဆောက်ရန် ပြီးခဲ့ သည့် နှစ်နှစ်ခန့်ကတည်းက စတင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အ တွင်း ဖွဲနုဆီစက်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဆီစက် တည်ဆောက်ရေးအပိုင်းမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြီးစီးနိုင်ရန်လျာထားကြောင်း သိရသည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဆန်မှ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော ဖွဲနုဆီစက်များကို ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအ သင်းချုပ်မှသိရသည်။
ဘရာဇီး ဆည်ကျိုးကျမှု လူငါးဦးကို ဖမ်းဆီး၊ လူ ၈၄ ဦး သေဆုံးကာ ၂၇ဝ ကျော်ခန့် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိ
မဟာမုနိဘုရားကြီး ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြတိုက်နှင့် စောင်းတန်းလေးသွယ်တို့ကို ရှေးမ??